मोबाइल मार्केटिंग: यी उदाहरणहरूका साथ वास्तविक क्षमता हेर्नुहोस् Martech Zone
मोबाइल मार्केटि - - यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले सुन्नुभएको हुन सक्छ, तर, सम्भवतः, ब्याक बर्नरलाई अहिलेको लागि छोड्दैछ। सबै पछि, त्यहाँ व्यवसायका लागि धेरै धेरै च्यानलहरू उपलब्ध छन्, मोबाइल मार्केटिंग त्यस्तो छैन जुन बेवास्ता गर्न सकिन्छ?
निश्चित - तपाईं ध्यान दिन सक्नुहुन्छ % Of 33% जो यसको सट्टामा मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्दैन। २०१ devices सम्म विश्वव्यापी रूपमा मोबाइल उपकरणहरूको उपयोग बढेर% 67% हुने अपेक्षा गरिएको छ, र हामी अहिले त्यो टाढा छैनौं। यदि तपाईं बजारको यति ठूलो अंशलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले मोबाइल मार्केटिंगको सूचना लिनु पर्छ।
मोबाइल मार्केटि Cli्गले ग्राहकहरूलाई सेन्स गर्दछ
तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन बिना कहि पनि जानु भएको थियो जब अन्तिम पटक थियो? वा कतै गए जहाँ अरू कसैको थिएन? मोबाइल उपकरणहरू, विशेष गरी स्मार्टफोनले हामीलाई सुविधाजनक तरीकामा आवश्यक पर्ने जानकारी प्रदान गर्दछ।
हामी अनुप्रयोगहरू, भर्चुअल सहायकहरू, र हाम्रो ईमेलहरू जाँच गर्न सक्दछौं। हाम्रा उपकरणहरू प्राय: हाम्रो पक्ष छोड्दैनन्। त्यसोभए, मानिसहरूलाई फोनमा तपाईंको व्यापार बजार गर्न के यो कुनै मतलब छैन?
मोबाइल मार्केटिंग कम्पनीहरु को लागी Sense बनाउँछ
अपेक्षाकृत कम आउटलेटको लागि, तपाईं अभियानको विस्तृत श्रृंखला सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको बजार र तपाईंको बजेट अनुरूप हुनेछ।
A राम्रोसँग डिजाइन गरिएको अनुप्रयोगउदाहरण को लागी बिक्री को लागी मद्दत गर्न सक्छ। एएसडीएले यसको फाइदाको लागि गर्‍यो जब यो अनलाइन बिक्रीलाई बढावा दिने काममा आउँदछ। यसको अनुप्रयोग २ लाख पटक डाउनलोड भयो, ग्राहकहरू कम्पनीमा संलग्न हुन इच्छुक छन् भन्ने प्रमाणित गर्दै। अनुप्रयोग मार्फत बिक्रीहरू डेस्कटप कम्प्युटरमा भन्दा १.2 गुणा बढी छन्।
समग्रमा, परियोजना सफल साबित भयो।
तर अनुप्रयोगहरू हरेक कम्पनीको लागि उपयुक्त समाधान हुँदैन। त्यसोभए तपाई केमा केन्द्रित हुनुहुन्छ?
वालमार्टले यसको समग्र लोड समय 7.2.२ सेकेन्डबाट २.2.3 सेकेन्डमा घटायो। त्यो त्यति प्रभावकारी लाग्दैन जब सम्म तपाईं त्यस वरिपरि बुझ्नुहुन्न % Of 53% साइटमा बाउन्स गर्नुहोस् जुन लोड हुनको लागि तीन सेकेन्ड भन्दा बढी लिन्छ।
केवल फोटोहरू अप्टिमाइज गरेर, फन्टहरू परिवर्तन गरेर, र जाभा अवरुद्ध हटाएर, वालमार्टले साइटको लोड समय कम गर्न सक्षम भयो। के यसले भुक्तानी गर्यो? विचार गर्नुहोस् कि रूपान्तरण दर २% ले वृद्धि भयो, यो पक्कै भयो।
निसानले एक अन्तर्क्रियात्मक भिडियो सिर्जना गरेर अर्को स्तरमा उत्तरदायी डिजाइन लिए। यदि तपाईंले आफूले मनपराएको केही देख्नुभयो भने, स्क्रीनको एक साधारण ट्याप सबै प्रासंगिक विवरण ल्याउन पर्याप्त हुनेछ। अभियान successful 78% को सम्पन्न दर र ment%% को संलग्नता दरको साथ अत्यधिक सफल भयो।
मोबाइल मार्केटिंग एक शक्तिशाली उपकरण हो जसले मार्केटर्सलाई नयाँ दृष्टिकोणहरूको दायरा प्रदान गर्दछ जुन प्रभाव र कम्पनीमा लागत दुवैको हिसाबले अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। यसले अनुप्रयोगहरू वा अप्टिमाइज वेबसाइटहरू भन्दा धेरै धेरै समेट्छ।
तपाईको व्यावसायको लागि तपाईले अरु के सोच्न सक्नुहुन्छ:
स्थान आधारित सेवाहरू
यदि एक व्यवसायको रूपमा, तपाइँ अधिकतम आरओआई चाहानुहुन्छ जब यो तपाइँको मार्केटिंग खर्चको कुरा आउँछ, मोबाइल मार्केटिंगले तपाइँलाई अपेक्षाकृत कम लागतमा ग्राहकहरूमा पुग्नको लागि एक मार्ग प्रदान गर्दछ। यो समय छ तपाईंको कम्पनी को यो अत्यधिक प्रभावी उपकरण को शक्ति लाई अँगाल्ने शुरू गर्न को लागी।
बाट यो अद्भुत इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस् Appgeeks.orgउदाहरणका साथ पूर्ण, कसरी व्यवसायहरूले तिनीहरूको फाइदाको लागि मोबाइल मार्केटिंग प्रयोग गर्दछ। Appgeeks.org पाठकहरूलाई शीर्ष-निशान मोबाइल अनुप्रयोग प्रदायकहरूको बारेमा सान्दर्भिक डेटा प्रदान गर्दछ।
टैग: appgeeksasdaब्लूटूथकार्ल जुनियरDunkin 'डोनट्सईमेलफोर्डhalifaxघर डिपोikeaइन-खेल विज्ञापनहरूKLMlbmस्थान आधारित सेवाहरूमोबाइल बजार उदाहरणमोबाइल साइट पुनर्निर्देशननिसानपिज्जा हटसूचनाहरू धक्का दिनुहोस्QR कोडहरूरातो छाना सरायसीटल सूर्य ट्यानएसएमएसस्टारबक्सटेको बेलटाओ नाइटक्लबटपशपwalmart